Dowlada oo beenisay in uu jiro qorshe wax loogaga bedelayo heshiiskii Doorashooyinka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Afhayeenka Xukuumada federalka Soomaaliya Maxamed Ibraahin Nuur oo ka hadlayay shirkii maanta ugaga furmay magaalad Muqdisho Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran ayaa beeniyay in kulankan uu yahay mid wax loogaga bedelayo heshiiskii 17kii September ee sanadkii hore ee arrimaha doorashooyinka.
Macalimuu ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka la isla dhex marayo ee ku saabsan in qorshaha shirka uu yahay in wax loogaga bedelo qaar ka mid ah qodobadii lagu heshiiyay shirkii dhamaadkii bishii hore ee lagu qabtay Muqdisho iyo shirkii 17ka September 2020.
“Ma jiro wax qroshe ah oo lagu bedelayo heshiiskii 17ka September, kulankana waxaa loogaga hadlayaa oo kaliya sidii loo dardargelin lahaa heshiisyadii hore loo gaaray.”ayuu yiri afhayeenka xukuumada oo aan shaacin wararka la isla dhex marayo ee uu beeniyay.
Hase ahaatee baraha bulshada iyo warbaahinta qaarkood ayaa qorayay inuu jiro qorshe wax loogaga bedelayo heshiiskii hore sida in lagu soo koobo magaalooyinka doorashada ay ka dhacayso hal magaalo iyo in tirade ergada lagu soo koobayo 51 xubnood.
Kulanka maanta ayuu ku sheegay afhayeenka in loogaga hadlay mudadii bisha ahayd waxyaabihii qabsoomay,horumarada la gaaray iyo caqabadaha jira.
Shirkan oo sii socon doona maalinta berri ah ayaa lagu wadaa inay warbixin ka dhagaystaan madaxda golaha wadatashiga qaran guddiga farsamo ee dhowaan uu magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble.